बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Saturday, 08 May, 2021
कथा : पहिलो घुस access_timeफागुन ८, २०७७
- बलबहादुर थापा मगर उसले तलब थाप्नेबित्तिकै रकमको जोड–घटाउ गर्न थाल्यो । चिया पसलको उधारो दुई हजार । मोबाइल खर्च एक हजार । आगामी महिनाको खाजा खर्च तीन हजार । बुट फाटेको छ, किन्नका लागि दुई हजार । युनिफर्म खुइलिएर सेतै भएको छ । हाकिमबाट तीन पुस्तालाई पु...
लघुकथा: झाडाबान्ता access_timeकात्तिक १७, २०७७
-भरत सिग्देल गोठमा गाईगोरु पालिन्थ्यो। बा आफ्नै गोठमा जन्मेका बाच्छा दाएर खेतबारी जोत्नुहुन्थ्यो। आमा कुँडेमा गाईको दूध तताएर दही बनाउने, मही पार्ने र घ्यु सङाल्ने गर्नुहुन्थ्यो। गाईको दूध र घैयाको भातको स्वाद ऐलेसम्म जिब्रोमा झुण्डिराछ।गाईको घ्यु ठोक्के मर्क्या ठाउँमा घस...
कथा : धुवाँ access_timeअसोज १४, २०७७
अनियन्त्रित साँझ... । मानिसको समूह एउटा बस्तीको कुनामा जम्मा भएका थिए । गोधुली साँझमा बस्तीका मानिस बास बस्न हतारिँदै थिए । अस्ताउन आँटेको घामका किरण धमिला हुँदै थिए । धर्तीले बिस्तारै जुनलाई स्वागत गर्न आतुर थियो । मानिस विचार सून्य थिए । बस्तीको एकान्तमा कुरूप नार...
कथा : म दले होइन access_timeभदौ ६, २०७७
उसले रिसाएर ढ्याक्क फोन राख्यो । ऊ त्यसरी रिसाउनुको पनि कारण छ । तर यो कारण सुनाउनुभन्दा अगाडि उसको अलिकति कथा बताउनु पर्छ । ऊ अर्थात् मेरो साथी दलबहादुर । उसको वास्तविक नाम त अर्कै छ तर मानिसहरु यसलाई हेपेर दले भन्छन् । तर म आफ्नो बालसखा भएकाले माया गरेर द...
‘विपत्ति’ले सम्झाएको त्यो घर access_timeअसार ७, २०७७
-प्रकाशकुमार सिग्देल काँठो परेको धोतीको फेरले पसिना पुछ्दै एकछिन चौतारीमा सुस्ताएपछि हजुरबाले भन्नुभयो, 'किन यति ढिलो गरिस् त नि ! उहाँड कति बजे हिन्याथिस् र ? अब गाडी साडी पाइन्न यो उकालो हिनेरै जान पर्नि भो ।' म आउने थाहा पाएर हजुरबुवा खुशीले सकि...
प्रकृतिसँग क्षमा याचना access_timeबैशाख २८, २०७७
-प्रज्ञा निरौला आज उसको र मेरो जम्का भेट भयो । सधैँ झैँ म मुन्टो बटारेर हिँड्न खोज्दै थिएँ, उसले हात अगाडि बढायो । बाध्यतामा हात मिलाएँ अनि उसले मसँग अङ्कमाल ग¥यो । मलाई मन थिएन, तसर्थ नाक खुम्च्याएँ तर ऊ उन्मत्त हाँसो हाँसिरहेको थियो । अङ्कमाल गर्दाग...
‘जूनेलीले हिँडेको गोरेटो’ access_timeबैशाख १५, २०७७
रिमा केसी पुसको मध्य जाडो छ । चारैतिर चिसो सिरेटो चलिरहेको छ, मानौँ काठमाडौँ जै कठ्याङ्ग्रिएको छ । चिसोले मलाई एकदमै सताउँछ । हात गोडा सुन्निएका छन् । टाउको रमरम दुखिरहेको छ । जाडो महिनाभर रुघाले मलाई बेपत्तासँग माया गर्छ । दिनभरि अफिसको कामको चटारोले लख...
कथा : तिलस्मी चस्मा access_timeबैशाख १३, २०७७
–डा. राजु अधिकारी त्रिपुरेश्वका सबैजसो चस्मा पसलहरु चाहार्दा पनि उनले आफूले खोजेको चस्मा भेटाउन सकेका थिएनन् । भेटाउन पनि कसरी ? उनले किन्न चाहेको चस्मा थियो नै अनौठो– तिलस्मी चस्मा । तर उनले आशा मारिसकेका भने थिएनन् । अब एक दुई चस्मा पसल मात्र सोध्न ...